अभिनेत्री दिशाले किन छोडिन् अक्षय कुमारको ‘मंगलयान’ ? यस्तो रहेछ कारण ! - prawaskhabar
एजेन्सी, ३ कात्तिक । प्राय पछिल्लो समयमा बलिउडमा चर्चामा आउँदै गरेका कुनै पनि कलाकारहरुले आफ्नो भविष्यलाई लिएर निकै सतर्कता अपनाउन थालेका छन् । अहिलेकाे समयमा आफ्नो फोशुटको कारण चर्चामा आईरहेकी अभिनेत्री दिशा पटानी पनि ‘बागी २’ फिल्मको सफलता पछि आफ्नो बाँकी करियरप्रति निकै सतर्कता अपनाउँदै आएकी छन् ।
भर्खरै मात्र निर्देशक आर बाल्कीको आगामी फिल्म ‘मंगलयान’मा दिशा छनौट भएकी थिइन्, तर समाचारमा आए अनुसार उनले यो फिल्मबाछ हात झिकेकी छन् । तर सुरुमा यो फिल्मको लागि दिशालाई अफर आउँदा उनि निकै खुसी भएको कुरा पनि विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा आएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा न्यु बलिउड गर्ल दिशाले किन फिल्म गर्नबाट पछि हटिन् भन्ने प्रश्न छाउन थालेको छ ।
किन छोडिन् फिल्म ?
बलिउडमा अहिलेसम्म यस्तो हुन्थ्यो कि नयाँ कलाकारहरुले आफुभन्दा स्थापित स्टार्सहरुसँग काम गर्ने मौका पाउँदा कुनै पनि हालतमा फिल्म छोड्न मान्दैनथे । तर अहिले यो कुरा पुरानो भइसकेको छ । समाचारमा आएअनुसार दिशाले यो फिल्ममा उनको अलवा अन्य तीन फिमेल कलाकारहरुको पनि मुख्य भुमिका रहेको थाहा पाएपछि फिल्मबाट हात झिकेकी हुन् ।
जानकारीमा आए अनुसार दिशाले धेरै लामो समयसम्म सोँचबिचार गरेर मात्रै फिल्मबाट हात झिकेकी हुन् । यो फिल्ममा अभिनेता अक्षय कुमार र अर्की अभिनेत्री विद्या बालनको पनि मुख्य भुमिका छ ।
गजल , छैन सरकारको साहरा ,
किन चुप ऐश्वर्य ?
Spread the loveअन्तराष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका महासचिव तथा कतार नेपाली एकता समाजका सचिवालय सदस्य लुमाकान्त पुन मगर, एकता समाजका केन्द्रिय सदस्य मिनराज पुन मगर,जनजाति सम्मेनल जिल्ला समिति दाङका सल्लाहकार जित…